Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista | Androidsis
Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro: Nooc cusub oo heer sare ah
Huawei loAs waxaa xaqiijiyay shirkadda Huawei lafteeda horaantii bishaan, Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro ayaa la soo bandhigay horeba rasmi ahaan. Shirkaddu waxay ku qabatay munaasabad magaalada Munich taas oo ay nooga tagayso noocyadeeda cusub ee dhamaadka-sare. Toddobaadyadan waxaa jiray warar xan badan oo ku saabsan noocyadan cusub, laakiin ugu dambeyn maanta waxaan awoodnay inaan wax walba ka ogaano.
Waxaa jiray noocyo faallooyin ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee Huawei Mate 30, sida midka barnaamijyada Google aysan isticmaali doonin. Shirkaddu way aamustay bilooyinkan oo dhan maanta waxay nooga tagayaan meelo aad u sarreeya loogu yeero inay noqdaan guul suuqa. Qeexitaanno wanaagsan, halkaasoo sawirku mar kale taagan yahay, marka lagu daro awooddeeda weyn.
Sidii ay usbuucyadan u hadlayeen, labadii taleefan haysay naqshad la mid ah tii sanadkii hore. Xaalada qaabka caadiga ah, darajo qaab dhibic biyo ah, caqli badan oo ku fadhida boos yar. In kasta oo qaabka Pro uu haayo heer caan ah oo caan ah, inkasta oo uu ka khafiifsan yahay jiilkii hore.
3 Awood saafi ah iyo sawir qaadis hagaagsan
4 Iyada oo leh Android Open Source iyo iyada oo aan lahayn Google Apps
5 Qiimaha iyo bilowga
First of dhan Waxaan ka hadleynaa telefoonka magaca u bixinaya xadkaan. Sida caadada u ah noocyadan, Huawei Mate 30 waa mid ka fudud labada taleefan, in kasta oo farqiga u dhexeeya labada taleefan aanu weynayn. Way ku filan yihiin inay arkaan in qaabka Pro uu nooga tagayo wax kale kiiskan. Laakiin waxaan helnaa dhammaad aad u sarreeya, oo leh wax kasta oo lagu guuleysto dadka isticmaala. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Screen 6.62 inji cabirkiisu waa saliid
Kaamirada gadaal 40 MP SuperSense + 16 MP xagal ballaadhan + 8 MP telephoto
Tilmaamo kale Shaashada sawirka shaashadda / NFC / 3D aqoonsiga wajiga /
Batariga 4.200 mAh oo si xawli ah loogu soo oogayo 40W iyo lacag la’aan wireless ah oo ah 27W
Second waxaan ka heli taleefanka ugu awoodda badan ee dhamaadka sare sare ee sumadda Shiinaha. Huawei Mate 30 Pro wuxuu leeyahay wax walba oo ka mid ah moodooyinka ugu iibinta wanaagsan qaybtan suuqyada bilaha soo socda. Waxaa loo soo bandhigay sidii taleefan awood leh, oo leh astaamo farsamo oo wanaagsan, oo leh feejignaan gaar ah sawir qaadista kiiskan. Dhammaantood waa heer sare oo keeni kara dagaal badan suuqa. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Sida aad u aragto, waxaa loo soo bandhigay qaab moodel-sare ah oo ugu dhameystiran dhan walba. Aad isugu dheelitiran dhammaan dhinacyada, waan xaqiijin karnaa taas waa astaanta cusub ee sumadda Shiinaha bilaha soo socda.
Awood saafi ah iyo sawir qaadis hagaagsan
Sidii lagu yaqaanay toddobaadyo, Kuwani Huawei Mate 30 waxay u isticmaalaan Kirin 990 processor ahaan. Waa processor kaas oo ah si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019 horaantii bishaan. Marka lagu daro inuu yahay processor-ka ugu awoodda badan ee soo saaraha Shiinaha uu nooga tagay illaa hadda suuqa oo ah kii ugu horreeyay ee la yimaada 5G asal ahaan isku dhafan. Qalabkani wuxuu taleefannada siiyaa awood aad u weyn, marka lagu daro siinta caqliga macmalka ah door weyn.
Kaamirooyinka ayaa ah mid ka mid ah horumarada weyn ee jiilkan. Huawei Mate 30 wuxuu adeegsadaa dareemayaal seddex geesood ah iyo qaabka Pro wuxuu u adeegsadaa afar kamarad kiiskan. Dareemayaasha la adeegsaday ayaa la hagaajiyay. Waxa intaa dheer in lahaansho horumarineed oo xusid mudan xagga duubista fiidiyowga. Gaar ahaan duubista dhaqdhaqaaqa aad u gaabiska ah, iyada oo ay suurtagal tahay in lagu duubo 7680 fps oo leh qaabkan 'Pro'. Sidan oo kale waxay ka sarreysaa dhammaan tartamayaasheeda, iyadoo mar kale muujineysa in shirkaddu tahay tixraac ku saabsan berrinka sawir qaadista taleefanka.
Iyada oo leh Android Open Source iyo iyada oo aan lahayn Google Apps
Mid ka mid ah shakiga weyn ee adeegsadayaashu waxay ahayd in la ogaado nooca nidaamka hawlgalku uu noqonayo midka ay noocyadan taleefannadu isticmaali doonaan. Huawei wuxuu xaqiijiyay in Mate 30-kan ay la yimaadaan Ilaha furan ee Android + EMUI 10 iyo HMS (Huawei Mobile Services). Barnaamijyada Google kuma imaan doonaan si asal ah taleefoonada, sida looga baqay toddobaadyadan. Sidaa darteed ma jiri doonaan Adeegyada Google Play ee lagu rakibay moodelladani asal ahaan.
Astaantu waxay xaqiijineysaa inay suurta gal tahay waqti yar in la helo iyaga. In kasta oo aan faahfaahin laga bixin foomka, kaliya in loo fududeynayo adeegsadayaasha inay helaan. Shirkaddu waxay xooga saareysaa dukaankooda App Galery, halkaas oo aan ka helno in ka badan 11.000 oo codsi maanta ah. Shaqada waxaa lagala wadaa shirkadaha kale si qaddarkani u kordho waqtiga. Waqtigaan la joogo, codsiyada sida Facebook ama WhatsApp wali lama hayo, laakiin waxaa la filayaa inay dhowaan suurta gasho.
Xalalkani wali waxay kujiraan horumar buuxa. Sababta oo ah, inbadan ayaa la ogaan doonaa markii Huawei Mate 30 uu suuqa ku dhacay, sida ay ka sheegeen shirkadda lafteeda. Sugitaan dhowr toddobaad ah, oo faahfaahin dheeraad ah hubaal ay soo bandhigi doonto soo saaraha laftiisa. Shirkaddu waxay xaqiijisay inay fududeyn doonaan rakibidda Google Apps ama Adeegyada Google Play. Dhanka kale, waxay si weyn u maal gashadaan barnaamijyadooda iyo bakhaarkooda u gaarka ah.
Dabcan, sida loo fahmi karo kiiskan, lDukaanka Google Play laguma rakibin asal ahaan taleefannada. Sida barnaamijyada Google ama kuwa kale ee aan weli ku jirin dukaanka, waxay u noqon doontaa suurtagal dadka isticmaala inay soo dejistaan. Laakiin sida ay ku suurta gali doonto waa wax hada laga shaqeynayo.
Sida lagu sheegay shirkadda, Huawei Mobile Services waxay lahaan doontaa GSM, GPS iyo khariidado u gaar ah. Iyaga ayaa hadda la horumarinayaa. Markaa waxaan la kulmi doonnaa iyaga oo adeegsanaya taleefannada dayrta. Mid ka mid ah riwaayadaha waaweyn waa Huawei Assistant. Maaddaama aadan adeegsan karin Kaaliyaha Google, waxay soo saareysaa kaaliye u gaar ah oo ay ku isticmaali karto taleefannada. Waxay u oggolaan doontaa shaqooyinka la midka ah waxa aan ku haysanno kaaliyaha Google. Kaliya kiiskan calaamadda lafteeda.
Marka lagu daro inuu naga tago dhammaan xogta ku saabsan qeexitaankiisa, nooca Shiinaha ayaa sidoo kale la wadaagay macluumaad ku saabsan bilowga oo ka mid ah Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro suuqa. Laba taleefan oo si xiiso leh loo sugayo suuqa, kuwaas oo aanan u sugi doonin waqti dheer arrintan.
Labada taleefan ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa rubuc afraad ee sanadkan. Taariikhaha u dhexeeya dhammaadka Oktoobar ilaa Nofeembar ayaa la tixgelinayaa, laakiin waxaa la filayaa in dhammaan xogta la soo bandhigi doono toddobaadyo gudahood. Marka wax badan ayaan kuu sheegi doonaa marka ay jiraan xog ku saabsan.
Telefoonada waxaa lagu furayaa Emerald Green, Space Silver, Cosmic Purple, Black colors. Intaa waxaa dheer, waxaa la xaqiijiyay in midabada Kaymaha Cagaarka iyo Liinta ah lagu bilaabayo noocyada maqaarka khudradda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro: Nooc cusub oo heer sare ah
Adoo adeegsanaya Android 10 waad ku hilmaami kartaa wax ka dhiibashada waxyaabaha ku jira webka barnaamijyada Chrome
Waa rasmi: Realme X2 wuxuu noqon doonaa mobiil leh Snapdragon 730G